आईपीएल : उत्कृष्ट फर्ममा दिल्ली र बैंंग्लोर, दुवै चौथो जितको खोजीमा
मुख्य पृष्ठक्रिकेट खेलकुदआईपीएल : उत्कृष्ट फर्ममा दिल्ली र बैंंग्लोर, दुवै चौथो जितको खोजीमा
विराटनगर, १९ असोज । १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १९औं खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर भिड्दैछन् । अंकतालिकाको शीर्ष स्थानमा रहन यी दुवैलाई आजको खेल जित्नैपर्ने हुन्छ ।
बेलु्का ७ः४५ बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा हुने यी दुईबीचको खेलमा दुवै टोली आफ्नो चौथो जितको खोजीमा हुनेछन् । प्रतियोगितामा हालसम्म सबै टोलीले आ–आफ्ना चार खेल खेलिसकेका छन्, चार क्लबले पाँच खेलसमेत खेलिसकेका छन् । तर जारी आईपीएलमा चार खेलमा तीन जित निकाल्न सफल यी दुई मात्र छन् ।
पहिलो खेलबाट नै विजयी यात्रा प्रारम्भ गरेको दिल्ली तेस्रो खेलमा हैदराबादसँग पराजित हुँदै प्रतियोगितामा जितको ह्याट्रिक गर्नबाट चुकेको थियो । पञ्जाबविरुद्धको पहिलो खेलमा सुपर ओभरमा जित निकालेको दिल्लीले दोस्रो खेलमा चेन्नईलाई ४४ रनले स्तब्ध बनाएको थियो ।
तर तेस्रो खेलमा हैदराबादसँग पराजित हुँदै अंक सुम्पिन बाध्य भएको दिल्लीले चौथो खेलबाट प्रतियोगितामा पुनरागमन गरिसकेको छ । चौथो खेलमा कोलकतालाई १८ रनले हराएको दिल्लीले उक्त खेलमा जारी सिजनकै सर्वाधिक रनसमेत बनाएको थियो । पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले कोलकतासामु दुई सय २८ रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो ।
यता, बैंग्लोर भने आजको खेल जित्दै प्रतियोगितामा जितको ह्याट्रिक गर्न चाहन्छ । लगातार दुई खेल जितेर पनि तेस्रो खेलमा पराजित भएका राजस्थान र दिल्ली प्रतियोगितामा जितको ह्याट्रिक नजिक पुगे पनि सफल हुन सकेनन् । बैंग्लोरलाई आज ह्याट्रिक गर्ने अवसर भए पनि स्थिति त्यति सहज भने हुने छैन । प्रतियोगितामा निकै फर्ममा देखिएको दिल्ली बैंग्लोरलाई कडा टक्कर दिन तयार छ ।
पहिलो खेलमा हैदराबादलाई १० रनले हराउँदै सुखद सुरुआत गरेको बैंग्लोर दोस्रो खेलमा भने ९७ रनको भारी अन्तरले पराजित भएको थियो । तर तेस्रो खेलमा मुम्बईलाई सुपर ओभरमा हराउँदै लयमा फर्किएको संकेत गरेको बैंग्लोरले चौथो खेलमा राजस्थानलाई आठ विकेटले हराउँदै आफ्नो अब्बल क्षमता देखाइसकेको छ ।
उत्कृष्ट फर्ममा रहेका यी दुवै टोलीबीचको आज हुने खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । आजको खेलमा जित कसले आफ्नो पक्षमा पार्ने हो त्यसको लागि खेल हेर्नुको विकल्प रहँदैन ।
यी दुईले आईपीएलमा हालसम्म एकअर्काविरुद्ध २३ खेल खेलिसकेका छन् । २३ मध्ये १४ खेलमा बैंग्लोर सफल भएको छ भने दिल्लीले आठ खेलमा मात्रै जित निकालेको छ । यी दुईबीचको २०१५ आईपीएलका एक खेल भने नतिजाविहीन भएको थियो । २०१९ को आईपीएलका दुवै भेटमा दिल्लीले बैंग्लोरलाई हार चखाएको थियो भने बैंंग्लोरले २०१८ को आईपीएलको दुवै खेलमा दिल्लीलाई पराजित गरेको थियो ।
यी दुईबीचका पछिल्ला सात खेलको नतिजा विश्लेषण गर्ने हो भने बैंग्लोर अघि छ । सात खेलमध्ये तीन खेल मात्र गुमाएको बैंग्लोरले चार खेलमा भने जित दर्ता गरेको छ । अघिल्लो संस्करणको दुवै भेटमा भएको हारको बदला लिने बैंग्लोरसँग मौका छ भने बैंग्लोरमाथिको जितको यात्रा लम्ब्याउने अवसर दिल्लीसँग छ ।
आईपीएलमा दिल्ली र बैंग्लोरका पछिल्ला सात खेल
आईपीएलमा दिल्लीले खेलेको पछिल्लो सात खेलको नतिजाले दिल्ली उत्कृष्ट लयमा रहेको देखाउँछ । सातमध्ये पाँच खेलमा जित निकालेको दिल्ली अघिल्लो संस्करणको आईपीएलको दोस्रो क्वालियफायरमा चेन्नईसँग पराजित हुँदै फाइनल पुग्नबाट रोकिएको थियो । तीन खेलमा हार भोगेको दिल्ली चेन्नईसँग पराजित भएपछि पहिलो पटक जारी संस्करणमा हैदराबादसँग स्तब्ध बनेको थियो ।
यता, बैंग्लोरको पनि पछिल्ला सात खेलको नतिजा सन्तोषजनक नै छ । सातमध्ये चार खेलमा विजयी भएको बैंग्लोर तीन खेलमा पराजित भएको छ । जारी संस्करणमा पञ्जाबसँग पराजित हुनुबाहेक बैंग्लोर पछिल्लो पटक २०१९ आईपीएलमा मुम्बईसँग सुपर ओभरमा पराजित भएको थियो ।
जारी संस्करणमा आफ्नो दुई खेल खेलिसकेको दिल्लीको दुबई रंगशालामा नतिजा सन्तोषजनक छ । यस रंगशालामा पाँच खेल खेलिसकेको दिल्लीले तीनमा जित र दुईमा हारको नतिजा भोगेको छ । जारी आईपीएलमा दिल्लीले दुबई रंगशालामा आफूले खेलेको दुवै खेलमा शतप्रतिशत जितको नतिजा आत्मसाथ गरेको छ । आफ्नो पहिलो जित दर्ता गराउने क्रममा दिल्लीले यसै रंगशालामा पञ्जाबलाई सुपर ओभरमा हराएको थियो भने चेन्नईलाई दोस्रो खेलमा ४४ रनले यहीँ पराजित गरेको थियो ।
यता, बैंग्लोरको यो मैदानमा प्रदर्शन उत्कृष्ट छ । हालसम्म दुबई रंगशालामा चार खेल खेलिसकेको बैंग्लोरले तीन जित र एक हारको नतिजा निकालेको छ । जारी प्रतियोगितामा हालसम्म यस रंगशालामा तीन खेल खेलिसकेको बैंग्लोरले एक खेलमा मात्रै हार भोगेको छ ।
दुवै क्लबका लागि निकै सफल सावित भएको दु्बई रंगशालामा आज बाजी कसले मार्ने हो ? त्यसको छिनोफानो बेलुका ७ः४५ बजे हुने खेलले गर्नेछ । आजको खेल जित्दै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा को पुग्ला ? यसको नतिजाको लागि हामी सबैले आजको खेल हेर्नैपर्ने हुन्छ ।